विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष, संक्रमण न्याय निरूपणमा ढिलाई - Nepal Daily
विहीबार, ११ मंसिर २०७७ Thu, 26 November 2020
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष, संक्रमण न्याय निरूपणमा ढिलाई
शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७७, ०९ : ३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तात्कालिन माओवादी राजनितिक मुलधारमा आएको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते आजकै दिन सरकारका तर्फवाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फवाट तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे शसस्त्र द्वन्दको औपचारीक अन्त्य भएको थियो ।
सोही सम्झौताको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालमा संविधानसभा मार्फत नयाँ लोकतान्त्रीक संविधान जारी भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन लगायतका काम सकिए पनि संक्रमणकालिन न्याय निरूपणको काम अझै पूरा भएको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ढिलाई हुँदा पीडित निराश छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको ९ वर्षपछि मात्रै ती आयोग गठन भए । तर, त्यसमा पदाधिकारी नियुक्ती र कानुन निर्माणको ढिलाई जस्ता कारण न्याय निरूपणको प्रकिया नै अघि बढ्न सकेन । आयोगका पदाधिकारीहरूले एक कार्यकाल गुजारेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुँदा पनि न्याय निरूपण प्रकिया निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ । वेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार २२३ उजुरीहरुको पनि छानविन चलिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सम्पन्न, गर्यो यस्तो निर्णय
थप १९४८ जनामा कोरोना पुष्टि, थप २८ जनाको मृत्यु
मन्त्री पदसँग राजधानी साटेको भन्दै विष्णु पौडेललाई देखाइयो कालोझण्डा
सबै देशमा खुल्यो हवाई उडान, सीसीएमसीले गर्यो यस्तो निर्णय
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १७९० कोरोना संक्रमित, थप २४ जनाको मृत्यु
सचिवालयमा पेश प्रस्तावमा न्यायालयप्रति गरिएको टिप्पणीबाट पछि हटे प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क, प्रचण्ड–नेपालबीच खटपट
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
नेकपा आन्तरिक द्वन्द्वमा बाबुरामको प्रवेश रहस्यमय : गोकुल बाँस्कोटा
हरिबोधनी एकादशी आज कि भोलि ?
आज घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेछ कारोबार ?
पार्टीको संकट निवारण गर्न हामी असफल भयौं, सबैले राजीनामा दिउँः महासचिव पौडेल
सचिवालय बैठक अगाडि ओली र प्रचण्डबीच छलफल जारी
निरन्तर बढ्न थाल्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
नेकपा सचिवालय बैठक जारी, प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै सदस्य सहभागी
कोरोना सङ्क्रमणले भट्टराई परिवारका दुई छोरालाई परिवारबाट चुँडेर लग्यो
आज बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
आज थपिए ३३०९ जना कोरोना संक्रमित, थप ३० जनाको मृत्यु
© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित Nepaldaily.com Designed & Developed By: Hashtag Cloud Pvt. Ltd.